Ebe nchekwa kaadị na-ọtụtụ-eji ese foto na ngwaọrụ ndị ọzọ na-eme ka n'aka na data a na-echekwa na-a nnọọ obere ọnọdụ nke nwere ike mgbe a ga-enweta na ala na afọ ojuju. Otú ọ dị na Itie oge ndị a kaadị na-rụrụ arụ na maka otu ihe na nke a nkuzi ndị kasị mma na mmemme iji naghachi data si kaadị ga-ẹkenam
Top 5 kaadị ebe nchekwa mgbake software nyochaa
N'okpuru ebe a bụ n'elu 5 ngwaọrụ na ike ga-eji na nke a iji jide n'aka na ihe kasị mma na-nyere ka ọrụ na okwu nke data mgbake:
1. CD mgbake toolbox
Ihe omume ahụ bụ otu n'ime ihe ndị kasị elu ngwaọrụ nke na-n'aka na data na-natara site fọrọ nke nta ọ bụla faịlụ usoro na ala na afọ ojuju. Usoro ihe omume e izizi maka abụba faịlụ usoro na Itie oge ọ na-e gbasaa na mepụtara na-akwado NTFS na ndị ọzọ na yiri faịlụ usoro nakwa iji jide n'aka na onye ọrụ na ahụmahụ a na enwekwukwa.
• mfe iji na ọ dịghị mmezi chọrọ mgbe niile.
• Ihe omume ahụ bụ nnọọ obere na size
• Ihe omume adịghị egosi na ahụ ike nke recoverable faịlụ
• The obere version bụghị e mepụtara
2. undelete m faịlụ Pro
Ịbụ a free ngwá ọrụ a usoro nwere ọtụtụ ihe na-enye ya ọrụ. Ọ e mepụtara bụghị nanị iji weghachi ehichapụ data ma ọ na-enịm na otu ọnọdụ ka mma. The pro nakwa dị ka ndị bụ isi na nsụgharị ndị n'efu na ọ bụ ya mere na-atụ aro na-aga na pro version dị ka ọ nwere ihe atụmatụ na zuru ezu iji na-enweta ihe mere ziri ezi.
• The ngwá ọrụ nwere nnọọ mfe iji interface
• The n'ozuzu ọrụ na mgbake ọnụego bụ egwu.
• Ihe omume ahụ bụ nke na-abụghị azụmahịa were naanị
• The obere version bụ mgbagwoju iji.
3. Obere Ike ngwá ọrụ data mgbake
Na ọkaibe atụmatụ na e agbakwunyere na doro ngwá ọrụ bụ maa mbụ oke nke niile ọrụ na-achọ free ngwaọrụ n'elu internet. Ọ bụkwa otu nke kasị mma ngwaọrụ nke nwere ikenyeneke mbiet data transfer ọnụego na maka otu ihe ahụ ọ na-eme n'aka na kacha afọ ojuju larịị nke ndị ahịa na-zutere na nke a.
• The n'ozuzu Ọdịdị nke usoro ihe omume bụ nnọọ ọrụ enyi na enyi
• The onye ọrụ nwere ike ijide n'aka na omume na-eji na akara na ihe ndị a chọrọ
• Ihe omume rapaara kpọmkwem na Windows 8
• The n'ozuzu faịlụ mgbake ahụ ike na-adịghị egosipụta.
4. Tokiwa Data mgbake
Nke a na usoro dị iche iche site ọzọ dị ka ọ na-eme n'aka na mgbọrọgwụ directories nke disks na-nyochaa tupu ọ bụla edinam na nke a na-e. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na usoro ihe omume dị n'ụzọ zuru ezu-akpaghị aka na onye ọrụ nwere ime ihe ọ bụla tupu data na-gbakee. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na usoro ihe omume na-adịghị ga arụnyere na otu mbanye si ebe data a ga-gbakee.
• Ihe omume ahụ bụ nnọọ mfe iji wụnye na-ewe obere disk ohere
• The n'ozuzu irè nke usoro ihe omume dị egwu
• Ihe omume nanị na-akwado ndị windows n'elu ikpo okwu bụghị Linux ma ọ bụ Mac.
Nke a bụ a ga-enwe usoro ihe omume ndị ọ dị mkpa na-eme ka n'aka na needful na-eme mgbe na kaadị na-emerụ. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma ngwaọrụ na-enye aka ijide n'aka na data mgbake bụghị a nnukwu ndibiat mgbe niile. Dị ka aha na-atụ aro na n'ozuzu irè nke usoro ihe omume pụrụ-enwe dị ka ọ na eneme n'ozuzu irè nke partitions nke kaadị na akwusila data na ala.
• Ọ bụ otu n'ime ndị na omume na ihe nkezi ọrụ nwere ike iji na ala
• Ihe omume e mepụtara iji jide n'aka na ọdịnihu mmelite nwekwara ịnọgide free
• Ọ na-weere otu faịlụ na oge
• The n'ozuzu interface bụ outlandish
Aha & Metrics
File mgbake ọsọ
Disk Space oriri
Undelete m faịlụ
Obere ike ngwá ọrụ
Tokiwa Data mgbake
Wondershare Data mgbake
Wondershare Data Recovery Usoro
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma omume nke jide n'aka na needful na-eme na a n'ụzọ na-abụghị nanị na egwu ma na-enye ohere onye ọrụ iji na-enweta nsonaazụ kacha mma n'ime oge ọ bụla ma ọlị. The interface bụ ezie na ọ bụghị dị ka kwa ugbu a ụkpụrụ ma mmepe e mere na-eburu n'uche onye ọrụ afọ ojuju na maka otu ihe ahụ usoro ihe omume e gosiri elu. Iji nweta nsonaazụ kacha mma na mmekọrita na data mgbake ọ na-gwara iji jide n'aka na usoro na e kwuru ebe a na-soro na zuru iji jide n'aka na onye ọrụ bụghị nanị na osịmde arụpụta ihe kasị mma kamakwa uru na-enwe dị ka kwa mkpa na ọchịchọ.
1. The ikpe mbipute nke usoro ihe omume na-atụ aro ike ibudata na ọ ga-mere site na isoro njikọ http://www.wondershare.com/data-recovery/guide.html
2. The faịlụ ụdị peeji ga-ahụ na-egosi na onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na faịlụ ụdị na-abụghị nanị họrọ ma na-esote button na-enwe:
3. The ọnọdụ bụ mgbe ahụ na-kpọmkwem iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na mmekọrita na n'ozuzu mgbake usoro:
4. Ozugbo faịlụ e natara onye ọrụ mkpa inyocha ha iji jide n'aka na ndị dị mkpa na-pịrị ma ọ bụ ticked otu otu iji jide n'aka na ha na-pụta ìhè. Ozugbo ọ e mere onye ọrụ ugbu a kwesịrị ijide n'aka na naghachi button a pịrị mezue usoro na zuru:
Olee otú naghachi ehichapụ faịlụ site na kaadị ebe nchekwa dị mobile
> Resource> Kaadị ebe nchekwa> Kedu otu bụ ihe kasị mma na kaadị ebe nchekwa mgbake software